गणतन्त्र स्मारक ‘पर्यटकीय केन्द्र’ बनाउने योजना, काम अन्तिम चरणमा - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
मङि्सर ०६, २०७४ 942 ऊर्जा खबर/काठमाडौं ।
नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र गणतन्त्र स्थापनाको प्रतीकका रूपमा गणतन्त्र स्मारक भइरहेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि सरकारले गणतन्त्रको झझल्को दिने गरी स्मारक निर्माण सुरु गरेको हो ।
नारायणाहिटी दरबारभित्र निर्माणाधीन गणतन्त्र स्मारक
स्मारकको अधिकांश भौतिक संरचना निर्माण पूरा भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप–महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताए । ‘अब थोरैमात्र काम बाँकी छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘स्मारकले देशको पहिचान दिनेछ ।’
२०६९ चैतबाट सुरु भएको काम भूकम्प नाकाबन्दी लगायत कारणले पूरा हुन डेढ वर्ष ढिलो भएको छ । बिकोई विल्डर, स्काई विल्डर तथा बंगलामुखी कन्सट्रक्सनसँग २०६९ मंसिर २२ गते सम्झौता गरेको थियो ।
२०७२ मंसिर २१ मा स्मारक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नारायणहिटी क्षेत्रको ८२ रोपनी क्षेत्रफल छुट्ट्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, हाल ३५ रोपनी जग्गामा मात्र स्मारक बनेको छ ।
काम सम्पन्न भएपछि दरबार संग्रहालयलाई हस्तान्तरण गरिने गेलालले बताए । विभागका अनुसार स्मारक निर्माण गर्न ४२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ३४ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
१२ मिटर उचाइ रहने स्मारकमा अप्पर बेसमेन्ट तथा लोअर बेसमेन्ट गरी दुई ग्यालरी रहनेछन् । यस्तै, चार वटा खम्बामा बेपत्ता पारिएका, अंगभंग भएका, मृत्यु भएकाको स्मरण गरिनेछ । स्मारकको फ्लोरमा धातुले बनेको नेपालको नक्सा राखिनेछ । स्मारक अपांगमैत्री हुने र जमिनमुनिको तलामा हावा पास हुने प्रविधि गरिएको छ ।
सरकारले स्मारकलाई देशमा गणतन्त्र प्रतीकको रूपमा चिनाउनुको साथै आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकीय केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा निर्माण गर्ने भनिएको गणतन्त्र स्तम्भको काम भने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।